About Us - Foshan Jingyi Ifenitshala Industry Co., Ltd
Le ise Shunde, isixeko esitsha industrial xa besiza le Pearl River Delta kunxweme of China. It uyonwaba nendawo kuluncedo geographical kunye nokuthuthwa lula. Kuyinto empumalanga ukuya Pearl River, ezantsi Zhuhai, ngasentshonalanga Heshan, yaye entla Guangzhou. I-105 Highway National icanda, kwaye Guangzhou-Shenzhen Expressway idlule, kwaye umzila omhle singqongwe Chengbo ne Bilang.
Le nkampani iye yasekwa ngo-2011 emva kweminyaka engaphezu kwama-20 ngomsebenzi onzima kunye imizamo emikhulu, kukhuphiswano kwimarike bungwanyalala, njengoko abasakhasayo yenkampani iyaqhubeka ukwandisa, ukusebenza kwayo liyaqhubeka nokwanda, yaye kwimarike iyaqhubeka ukwandisa. Bonke abasebenzi yenkampani zisoloko silungiselela ingomso nganye entsha, sizama ukunika abathengi kunye inkonzo neyanelisa ngezakhono olugqibeleleyo kunye nezimbo inoveli.
Namhlanje, inkampani ufana nje iperile eqaqambileyo, bubengezela Pearl River, etsala iindwendwe ezivela kulo lonke ihlabathi nge charm yayo eyahlukileyo.
Production ngundoqo ekudaleni inzuzo. Ukuze ukunika bonke abasebenzi indawo yemveliso esempilweni kwaye mnandi, Jingyi Inkampani unyanzelisa intsingiselo yokuba "imveliso ephucukile, ukhuseleko kuqala" kwaye wenza konke okusemandleni alo.
Kwimveliso, inkampani ikhuthaza ezintsha. Le nkampani unika ukhuthazo lokomoya eziphathekayo bonke abasebenzi abathe banegalelo elibalulekileyo ucwangciso kwimveliso. yemveliso nkampani ibambelela inkqubo umsebenzi iiyure ezisibhozo-ukuqinisekisa ukuba abasebenzi basebenze nokuphumla kwaye uphumle. Ngelo xesha, inkampani nayo basiwa izithuthi eyodwa lula abasebenzi ukuba baye emsebenzini; ukuqinisa ze umlilo, bakhumbuze abasebenzi ukuba ukulibala ukhuseleko imveliso; ukuphumeza uqeqesho ezintsha zoqeqeshelo phambi abaqeqeshwa, abasebenzi abatsha kunye namasebe ulawulo yabasebenzi bendawo kubasebenzi abatsha phambi kokuba ungene Training mveliso ukuphucula umgangatho ngokubanzi inkampani; axhotyiswe ngezixhobo ofisi mihla ukuphucula ukusebenza umsebenzi; ukwabiwa rhoqo izinto inshorensi yabasebenzi, elungele uxolo abasebenzi 'lwengqondo ukuvelisa ...
Konke oku kuqinisekisa ngqo ukusebenza kakuhle kunye nangocwangco yemveliso yenkampani.
Ubomi kunye nemveliso basenokuvana. Ukuze kuphuculwe umgangatho wobomi abasebenzi, Jingyi Inkampani owakhe abasebenzi dormitory nempilo yokutyela iiwindow kakhulu futhi zicocekile, ichibi lokuqubha kunye ibala lezemidlalo ebanzi kwaye efanelekileyo kwindawo ephilileyo kwabasebenzi.
Kukho iindidi kwamaziko karhulumente kwindawo ephilileyo: cinema, ilayibrari, iholo karaoke, isibhedlele, internet cafe, igumbi snooker itafile intenetya, TV, ngomnxeba, ifeni yombane, inkqubo isifudumezi-manzi sesola ... kuphucula ubomi kwabasebenzi ngaphandle ukusebenza, yongeza unxibelelwano abasebenzi. Zama ukudala imvakalelo ikhaya-ezifana kubasebenzi bakho.
Kule ndawo ephilileyo, abazalwana noodade abaninzi abavela kulo lonke ihlabathi zifana intsapho. Wonke rhoqo likhuthaza ukutshintshiselana kwaye nzulu ukuqonda ngokusebenzisa ezahlukeneyo yemisebenzi yenkcubeko (ezifana Mid-Autumn Festival yonyaka, koSuku loNyaka oMtsha, kunye uSuku lwabaseTyhini). Ukuba yenza abantu ndonwabe kwaye kufudumele.
Address: KwiGumbi 2-13, jiuwan ummandla mveliso, cha Chung idolophu, beijiao idolophu, kwisithili shunde, Foshan mzi, kwiphondo entsha Guangdong